EPP Ampahibato - Misy fiantraikany amin'ny fianaran'ireo mpianatra ny fahasahiranana ara-pivelomana
Mbola maro ny ankizy misedra olana eo amin’ny fampianarana eto amintsika, noho ny fahasahiranana ara-pivelomana, ka mitondra fiantraikany amin’ny fianaran’izy ireo.
Misedra olana ireo mpianatra ao amin’ny EPP Ampahibato
Mbola maro ireo mpianatra misedra olana ara-pivelomana eto amintsika, ka anisan’izany ireto mpianatra ao amin’ny EPP Ampahibato.
« Tsy ampy sakafo ny ankamaroan’ireo mpianatra amin’ny EPP », hoy Ravony Mahafaly Hanitra, mpampianatra kilasy faha 5 (7ème) ao amin’ny EPP Ampahibato.
Ankoatra izay dia « ratsy ny vokatra CEPE tamin’ny taona lasa nohon’ny fitokanana nisy tao amin’ny EPP Ampahibato », hoy hatrany izy.
Manoloana ireo olana ireo dia manampy ara-tsakafo sy ara-panabeazana ny mpianatra ao amin’ity EPP ity ny Rotary club Tsimbaroa. Misy araka izany ny fanomezana sakafo isaky ny Sabotsy maraina nandritra izay iray volana sy tapany izay ary tsy hijanona mandrapahatonga ny fotoana hanaovana ny CEPE. Misy ihany koa ny tosika na ny « cours de renforcement » isaky ny asabotsy.
Ny fampianarana ny ankizy hiatrika ny fiainana no vahaolana
« Ankoatra ny fahafahana fanadinam-panjakana dia zava-dehibe ny fampiharana ny fahalalana eo amin’ny fiainana », hoy Lizah Ndrialison, Filohan’ny Rotary Club Tsimbaroa, nandritra ny fanampiana nataon’izy ireo teny amin’ny EPP Ampahibato, ny Sabotsy teo.
Ravony Mahafaly Hanitra, mpampianatra kilasy faha 5 (7ème) ao amin’ny EPP Ampahibato, sy Lizah Ndrialison, Filohan’ny Rotary Club Tsimbaroa. cc: Toria Dimbiniaina
Omena lanja manokana araka izany ny fampianarana ny taranja « laza olana » ho an’ireo mpianatra ao amin’ny EPP Ampahibato. Tanjona ny hanatsarana ny vokatra CEPE amin’ity taona ity ary indrindra ny hamolavola ny sain’ny ankizy ahay hiatrika ny fiainana. Ao anatin’ny taranja ‘Laza olana » raha teo no ahitana ny lojika.Ity farany izay manefy ny toe-tsaina ahay handray fanapahan-kevitra manoloana ny trangan-javatra misy.
Marihina fa hanampy ity sekoly ity hatrany ny Rotary club Tsimbaroa mandrapahatonga ny CEPE, ary hisy ihany koa ny fizarana fitaovana ho an’ireo mpianatra hiatrehana ny fanadinana.